यदी तपाई सुनचाँदी किन्दै हुनुहुन्छ भने जानीराखौ आजको भाउ !
चैत १२, २०७४ बिगुल न्यूज- SG
काठमाडौँ, आज सोमबार सुनचाँदीको मुल्यमा कुनै फेरबदल भएको छैन। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको अनुसार आज आइतबार कै मुल्यमा सुनचाँदी किनबेच भैरहेको छ। आज छापावाला सुनको मुल्य प्रतितोला ५८ हजार ५ सय रुपैयामा कायम रहेको छ। साथै आज तेजावी सुनको मुल्य प्रतितोला ५८ हजार २ सय रुपैयामा कारोबार भईरहेको छ।
त्यस्तै आज चाँदीको मुल्य पनि स्थिर रहेको छ । आइतबार प्रतितोला ७ सय ४५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको चाँदीको मूल्यमा आज पनि कुनै परिवर्तन आएको छैन । गत बिहिबार देखि चाँदीको मुल्य स्थिर रहेको महासंघले जनाएको छ।
प्रकाशित : सोमबार, चैत १२, २०७४१२:२६
यदी तपाई विदेशबाट पैसा पठाउदै हुनुहुन्छ भने जानिराखौ आजको विनिमय दर !
घट्यो मलेसियन रिंगिटको मुल्य: यस्तो छ साउदी र कतारी रियालको दर…
बढ्यो सुनको मुल्य, चाँदीको मुल्य स्थिर!
कठोर नीति अख्तियार गर्दै सरकार: राजश्व छली गर्ने ब्यापारीको बैंक खाता रोक्का !
आज ह्वातै बढ्यो सुनको मुल्य, चाँदीको मुल्य स्थिर!
आज बिहिबार, ह्वातै बढ्यो सुनचाँदीको भाउ!
लगातार बढ्दै सुनको मुल्य, यस्तो छ आज सुनको भाउ